Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.2.3 Famaranana
Ny tetik'asa fanatanterahana ny olombelona dia mampifandray ny asan'ireo manam-pahaizana maro mba hamaha ny olana maivana izay tsy mora vahaolana amin'ny ordinatera. Ampiasain'izy ireo ny paikady fampitomboana-fampitomboana mba hamotehana olana goavana ho an'ny microtasque tsotra maro izay afaka hamaha olana amin'ny olona tsy manana fahaiza-manao manokana. Ny rafitra mpanampy amin'ny solosaina amin'ny ordinatera koa dia mampiasa fianarana fiara mba hanamafisana ny ezaka ataon'ny olombelona.
Amin'ny fikarohana ara-tsosialy, ny tetik'asa fanatanterahana ny olombelona dia azo ampiharina amin'ny toe-javatra izay tadiavin'ny mpikaroka hanasokajiana, code, na fametahana sary, lahatsary, na lahatsoratra. Ireo sokajy ireo dia matetika tsy ny vokatry ny fikarohana; fa kosa izy ireo dia fitaovana mivaingana ho an'ny fanadihadiana. Ohatra, ny famelabelarana ataon'ny olona amin'ny fandaharan-politika dia azo ampiasaina ho ampahany amin'ny fanadihadiana momba ny dingan'ny adihevitra ara-politika. Ireo karazana microtasks ireo dia mety hiasa tsara rehefa tsy mila fampiofanana manokana izy ireo ary rehefa misy fifanarahana mazava momba ny valiny marina. Raha toa ny sori-dalan'ny asa fanoratana dia manjary kokoa-toy ny hoe, "Moa ve ity tantaran'ny vaovao ity manosika?" - dia lasa zava-dehibe ny hahatakatra hoe iza no mandray anjara ary inona no mety hitranga. Amin'ny farany, ny kalitaon'ny vokatra fanatanterahana ny tetik'asa dia mifototra amin'ny kalitaon'ny zavatra entin'ny mpandray anjara: ny fako, ny fako.
Mba hanamafisana bebe kokoa ny hevitrao, ny tabilao 5.1 dia manome ohatra fanampiny momba ny fomba fampiasana ny olona amin'ny fikarohana sosialy. Ity tabilao ity dia mampiseho fa, mifanohitra amin'ny Galaxy Zoo, maro ireo tetikasa fananganana olona mampiasa ny tsenan'ny laboratoara microtask (ohatra ny Amazon Mechanical Turk) ary miankina amin'ny mpiasa mandray karama fa tsy mpirotsaka an-tsitrapo. Hiverina amin'ity adihevitra momba ny famporisihan'ny mpandray anjara ity aho rehefa manome toro-hevitra momba ny famoronana ny tetikasam-piarahamoninao.
Tabilao 5.1: Ohatra amin'ny tetik'asa momba ny tetik'asa amin'ny fikarohana sosialy
Antokon'ny antoko politika Code Text Tsena asa any Microtask Benoit et al. (2016)
Hamafa ny fampahalalana momba ny hetsika avy amin'ny lahatsoratra vaovao momba ny Hetsi-panoherana Occupy any amin'ny tanàna US 200 Text Tsena asa any Microtask Adams (2016)
Gazety ho an'ny Classify Text Tsena asa any Microtask Budak, Goel, and Rao (2016)
Manaova fampahalalana momba ny hetsika avy amin'ny diarin'ny miaramila amin'ny Ady Lehibe Voalohany Text Mpilatsaka an-tsitrapo Grayson (2016)
Eritrereto ny fiovan'ny sarintany Images Tsena asa any Microtask Soeller et al. (2016)
Jereo ny famaritana algorithmika Text Tsena asa any Microtask Porter, Verdery, and Gaddis (2016)